चितवनको स्थितिलाई कसले गम्भीरतापूर्वक लिने ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
चितवनको स्थितिलाई कसले गम्भीरतापूर्वक लिने ?
२०७७ भाद्र ३, बुधबार २०:३७ गते
चितवन नेपालको केन्द्र भागमा रहेको जिल्ला हो । यो जिल्ला स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायत धेरै दृष्टिकोणबाट यो अतिनै महत्त्वपूर्ण छ । स्वास्थ्यका हिसाबले हेर्ने हो भने यस जिल्लासँग जोडिएका नवलपरासी, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, मकवानपुरका बिरामीहरु उपचारका लागि चितवनमै निर्भर रहने गरेका छन् । यस अर्थमा पनि यी सबै जिल्लावासीहरुलाई राम्रो स्वास्थ्य प्रदान गर्ने जिम्मेदारी चितवन जिल्लाले बोकेको छ भन्दा गलत नहोला ।
राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि चितवन जिल्ला सधैँ अगाडि छ । यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, कोरोना भाइरस जस्तो महामारीका बेला आमजनताको स्वास्थ्यभन्दा राजनीति प्रिय भएको देखिनु हामी सबैका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।
यदि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीति नै गर्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता के का लागि ? कोरोना भाइरसको संक्रमणले जिल्ला आक्रान्त भइरहेका बेला यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुको साटो जिल्लावासीको स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन यसबारे सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिन्छ ।
कोरोना अस्पताल भनेर बोर्ड एकातिर राख्ने अनि कोरोनाका बिरामी सबैलाई भरतपुर अस्पतालमा अरु बिरामीसरह राख्दा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुन पुगेको समाचार गम्भीर छ । विश्व कोरोनाबाट संक्रमित भएको महिनौँ भइसक्दा हाम्रो प्रशासनले कुनै पाठ सिक्न नसकेको तथ्यले हामी जिल्लावासीलाई दुःखी तुल्याएको छ ।
कोरोना संक्रमणलाई रोक्न उद्योग संघको भवनमा बोर्ड राखेर काम सुुरू गरियो । यो निर्णयलाई जिल्लावासीले खुसीका साथ स्वागत गरेका थिए । तर, अस्पताल किन बन्द गरियो ? केही कमी कमजोरी भए सुधार गर्न सकिन्थ्यो । बजेट अभाव भएको भए थप्न सकिन्थ्यो । अस्पताल नै बन्द गर्नुपर्ने कारण के थियो ? आमजनताले यो प्रश्नको उत्तर चाहेका छन् । अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रले कोरोना जित्न सकेन, हामीले के सक्छौँ र भनेर प्रशासन पछि हटेको त होइन ?
बिना प्रयोगका सरकारी भवनहरुको सदुपयोग गरेर कोरोनाका संक्रमितहरुको सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर संक्रमणलाई रोक्न सकिन्छ । कोरोना संक्रमितहरुलाई अरु बिरामीसरह एकै भवनमा राखेर स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नै अफ्ठ्यारोमा पारिएको कुराले प्रशासनको लाचारीपन देखाउँछ ।
भरतपुर अस्पतालमा अहिले बिरामी राख्ने ठाउँ छैन । सामान्य अवस्थामा पनि भरिभराउ हुने भरतपुर अस्पतालमा अहिले कोरोनाका बिरामीलाई पनि सँगै राख्दा यसले कति ठूलो जोखिम निम्त्याइरहेको छ, यसप्रति कोही जिम्मेवार देखिँदैन । यस्तै हो भने आकस्मिक सेवा पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सम्बन्धित पक्षको यसतर्फ ध्यान जाओस् । स्रोत, साधन र उपाय भएर पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही भएको देख्दा हामी जिल्लावासीलाई धेरै दुःख लागेको छ ।
आमजनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । हामी जनताले जिल्लाको जिम्मेवारी लिएर बसेका सम्बन्धित पक्षबाट अपेक्षा नगरे कोबाट गर्ने ?
कोरोनाले सानो, ठूलो कुनै ओहोदाको भनेर हेर्दैन । सबै जना यसको उत्तिकै जोखिममा छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रशासनले छिटोभन्दा छिटो गम्भीरता देखाउनु जरूरी छ । हामी सबै जिल्लावासी सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छौँ ।
भोट माग्दा विकासका कुरा, अहिले स्वार्थको छुरा : जनता बबुरा !
शान्ति तपाईंबाट टाढा छैन !